Garab ka mid ah Guddiga Doorashada Somaliland oo doortay Guddoomiye iyo Guddoomiye ku xigeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xubnaha maamulaya Doorashada Somaliland ee Xildhibaannada labada Aqal ayaa iska doortay Guddoomiye iyo Guddoomiye kuxigeen, sida lagu shaaciyay barta Facebook ee Guddiga Doorashada FIET. Khadar Xariir Xuseen ayaa loo doortay Guddoomiye, halka Najiib Xuseen Samaale loo doortay Kuxigeen.
khilaafkii Siyaasiyiinta labada garab ee Gobolada Waqooyi ayaa u muuqda inuu dib u soo laba kacleeyay, maadaama Guddidii labada garab ka yimid ay khilaafka darteed labo hotel u kala dageen.
Wararka ayaa sheegaya in arrinta ugu weyn ee la isku hayo ay tahay in aanay doorashda Guddoomiyaha Guddiga ka qeyb galin saddexda xubnood ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha laga soo magacaabay, taasoo aheyd dood ay qabeen Garabka Cabdi Xaashi.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya oo gaaray Garbahaarey